ဂရြတျဟူလီယာကွောငျ့ ဇီဒနျးရဲ့ကမ်ဘာ့ဖလားခနျြပီယံအင်ျကြီ ဘယျမှာအဆုံးသတျသှားခဲ့သလဲ? – Play Maker Sports Journal
မာဖီက “ဂရြတျဟူလီယာကကြှနျတေျာ့မနျနဂြောပါ။ခငျဗြားလညျးသိပွီးသားပါ။ပွငျသဈမှာတုနျးကသူ့မှာဇီဒနျးနဲ့ခငျမငျမှုရှိသူသလိုဩဇာလညျးလှမျးပါတယျ။ဇီဒနျးနဲ့အဆကျအသှယျအမွဲရှိသူလညျးဖွဈပါတယျ။တဈနတေ့ော့ရုံးခနျးသို့ကြှနျတျောသှားလိုကျတယျ။အင်ျဂလနျမှာရှေးခယျြခံရပွီးတဲ့နောကျသှားခဲ့တာပါ။အဲဒီတုနျးကခရူဝီမှာအငှားနဲ့သှားကစားပွီးပွနျရောကျလာတော့ပုံမှနျကစားခှငျ့ရကာဆုဖလားတခြို့ရခဲ့သလိုအင်ျဂလနျမှာလညျးရှေးခယျြခံနရေပါပွီ။တဈနသေူ့ရုံးခနျးသို့ချေါပါတယျ။သူ့မှာပလတျစတဈအိတျတဈခုရှိတယျ။သူကအဲဒါကိုစားပှဲပျေါပဈတငျပွီး’ဒါမငျးအတှကျ’လို့ပွောပါတယျ။ ကြုပျကလညျး ‘ဘာလဲပေါ့’။အင်ျကြီဖွနျ့ကွညျ့လိုကျတော့ ဇီဒနျးဆိုပွီးရေးထားတာ။ကမ်ဘာ့ဖလားဗိုလျလုပှဲတံဆိပျပါတယျ။သူက’ဗိုလျလုပှဲပွီးတော့ဇီဒနျးကငါ့ကိုလကျဆောငျပေးခဲ့တာ။ဒါပမေယျ့ဒါကိုမငျးကိုပေးခငျြတယျ’လို့ပွောပါတယျ။ကြုပျအနညျးငယျတုနျလှုပျသှားတယျ။သူက ‘သူနဲ့စကားပွောပွီးပွီ။မငျးကိုပေးမယျလို့လညျးပွောခဲ့တယျ။ဒါကမငျးရဲ့ခရီးအတှကျဆုပေါ့ကှာ’လို့ပွောပါတယျ။အမှနျအတိုငျးပွောရရငျကြုပျကအင်ျကြီနဲ့ပတျသကျပွီးပရိသတျမဟုတျပါဘူး။ဒါပမေယျ့ဒါကကြှနျတေျာ့ကိုဂရုတစိုကျပေးတဲ့ဟာ၊အရေးပါတဲ့အင်ျကြီလညျးဖွဈတယျ”လို့ပွောကွားသှားပါတယျ။
ဂျရတ်ဟူလီယာကြောင့် ဇီဒန်းရဲ့ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံအင်္ကျီ ဘယ်မှာအဆုံးသတ်သွားခဲ့သလဲ?
မာဖီက “ဂျရတ်ဟူလီယာကကျွန်တော့်မန်နေဂျာပါ။ခင်ဗျားလည်းသိပြီးသားပါ။ပြင်သစ်မှာတုန်းကသူ့မှာဇီဒန်းနဲ့ခင်မင်မှုရှိသူသလိုဩဇာလည်းလွှမ်းပါတယ်။ဇီဒန်းနဲ့အဆက်အသွယ်အမြဲရှိသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်နေ့တော့ရုံးခန်းသို့ကျွန်တော်သွားလိုက်တယ်။အင်္ဂလန်မှာရွေးချယ်ခံရပြီးတဲ့နောက်သွားခဲ့တာပါ။အဲဒီတုန်းကခရူဝီမှာအငှားနဲ့သွားကစားပြီးပြန်ရောက်လာတော့ပုံမှန်ကစားခွင့်ရကာဆုဖလားတချို့ရခဲ့သလိုအင်္ဂလန်မှာလည်းရွေးချယ်ခံနေရပါပြီ။တစ်နေ့သူ့ရုံးခန်းသို့ခေါ်ပါတယ်။သူ့မှာပလတ်စတစ်အိတ်တစ်ခုရှိတယ်။သူကအဲဒါကိုစားပွဲပေါ်ပစ်တင်ပြီး’ဒါမင်းအတွက်’လို့ပြောပါတယ်။ ကျုပ်ကလည်း ‘ဘာလဲပေါ့’။အင်္ကျီဖြန့်ကြည့်လိုက်တော့ ဇီဒန်းဆိုပြီးရေးထားတာ။ကမ္ဘာ့ဖလားဗိုလ်လုပွဲတံဆိပ်ပါတယ်။သူက’ဗိုလ်လုပွဲပြီးတော့ဇီဒန်းကငါ့ကိုလက်ဆောင်ပေးခဲ့တာ။ဒါပေမယ့်ဒါကိုမင်းကိုပေးချင်တယ်’လို့ပြောပါတယ်။ကျုပ်အနည်းငယ်တုန်လှုပ်သွားတယ်။သူက ‘သူနဲ့စကားပြောပြီးပြီ။မင်းကိုပေးမယ်လို့လည်းပြောခဲ့တယ်။ဒါကမင်းရဲ့ခရီးအတွက်ဆုပေါ့ကွာ’လို့ပြောပါတယ်။အမှန်အတိုင်းပြောရရင်ကျုပ်ကအင်္ကျီနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမယ့်ဒါကကျွန်တော့်ကိုဂရုတစိုက်ပေးတဲ့ဟာ၊အရေးပါတဲ့အင်္ကျီလည်းဖြစ်တယ်”လို့ပြောကြားသွားပါတယ်။
အာဂငျြတီးနားရဲ့ကမ်ဘာ့ဖလားခွစေဈပှဲတှငျ ဝငျကစားတဲ့မကျဆီကို ပီအကျဈဂြီပေါကျကှဲ